प्रदेश ३ Archives – Page3of 97 – Samacharpati
”अरु रोगले मान्छेको मृत्यु भयो भने अहिले कोरोनाको कारणले भन्ने गरिएको छ” : स्वास्थ्यमन्त्री ढकाल
गण्डकी प्रदेश सरकारले किनेर खाने क्षमता नभएकाहरुका लागि राहत प्याकेज ल्याउने
हनुमन्ते खोला नजिकै एक महिलाको शव फेला
पशुपति क्षेत्र विकास कोषले निःशुल्क शवदाह सेवा शुरु
गण्डकी प्रदेश सरकारका नियुक्त पदाधीकारीहरु द्धारा एक महिनाको पारिश्रमिक उपचार कोषमा सहयोग
कोरोना संक्रमणको आशंका गरिएका दुई जनाको काठमाडौं वीर अस्पतालमा मृत्यु
नेपालमा तीन नेपालीमा मात्र कोरोना पोजेटिभ, ७०० भन्दा बढीको परीक्षण गर्दा सबैको नतिजा नेगेटिभ
काठमाडौँ, १३ चैत । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोनाको सङ्क्रमण भएको आशंकामा ७०० भन्दा बढीको परीक्षण गर्दा सबैको नेगेटिभ नतिजा आएको जनाएको छ । मन्त्रालयले आज आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले कोरोनाको आशङ्कामा स्वास्थ्य परीक्षण गर्न आएका ७०० भन्दा बढीको परीक्षण गर्दा कुनै पनि सङ्क्रमण फेला नपरेको बताउनुभयो । यसअघि नेपालमा तीन […]
नेपालमा अड्किए १३ हजार ६१७ जना विदेशी पर्यटक
काठमाडौं, १३ चैत । सरकारले सोमबारदेखि एक हप्ताका लागि लकडाउन गरेपछि नेपाल भित्रिएका तेस्रो मुलुकका विदेशी पर्यटक जहाँ छन् त्यही नै अड्किएका छन्। नेपाल पर्यटक बोर्डको तथ्यांकअनुसार १३ हजार ६१७ जना विदेशी पर्यटक विभिन्न बहानामा नेपालमा अड्किएका हुन्। मार्च महिनामा २५ हजार २५३ जना विदेशी पर्यटक नेपाल भित्रिएकोमा ११ हजार ६३६ जना फर्किसकेको बोर्डको तथ्यांक […]
कोभिड–१९ लाई थप फैलन नदिनका सार्वजनिकस्थलमा कीटनाशक औषधि छर्किने काम तीव्र
काठमाडौंँ, १३ चैत । काठमाडौँ महानगरपालिकाले विश्वभर फैलिएको कोभिड–१९ लाई थप फैलन नदिनका लागि सार्वजनिकस्थलमा कीटनाशक औषधि छर्किने कामलाई तीव्र बनाएको छ । यस क्रममा आज बिहान स्थानीय बबरमहल, बानेश्वर, तीनकुने, सिनामङ्गल जमल, लाजिम्पाट, पानीपोखरी हुँदै महाराजगञ्ज र वसन्तपुर आसपास र भित्री क्षेत्रमा केन्द्रित गरी उक्त औषधि छर्किएको थियो । कामपाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यका अनुसार […]
अटेरी नगरौं, आफन्तको शव हेरेर रुन पनि पाइन्न : संचारकर्मी सुर्य चन्द
काठमाडौँ, १३ चैत । विश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ को रोकथामका लागि नेपाल सरकारले जारी गरेको आदेश नेपाली जनताको पक्षमा सह्रानीय कदम हो । कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम न्यूनिकरणका लागि सरकारले मंगलवारबाट देशभर लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको थियो । विश्व कोरोनाभाइरस (कोभिड – १९) को महामारीको चपेटामा छ । कोरोना कहरबाट जोगिन विश्वका कतिपय देशले […]
विश्व रङ्गमञ्च दिवसदेखि क्वारेन्टाइन क्याम्पेनिङ्ग थिएटर फेस्टिभल हुँदै
काठमाडौं, १३ चैत । ‘लक डाउन’को गम्भीर समयलाई मध्यनजर गर्दै विश्व रङ्गमञ्च दिवसको अवसर पारेर भर्चुअल ‘रङ्गमञ्च महोत्सव’ हुने भएको छ । थिएटर मल–कीर्तिपुर रङ्गमञ्च र थिएटर सेन्टर फर चिल्ड्रेन (टिसिसी नेपाल)ले संयुक्त रूपमा महोत्सव आयोजना गरेका हुन् । ‘कोभिड–१९को महामारीले पैदा गरेको संकटको समयमा रङ्गमञ्चका दर्शकसँग निरन्तर सम्बन्धमा रहन फेस्टिभल गर्ने सोच बनाएको महोत्सव […]
सुशीलराज वाग्ले , काठमाडौँ, १२ चैत । टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग केन्द्रमा उपचाररत एक जनामा कोरोनाभाइरसको संक्रमित फेला परेको स्वास्थ्य मन्त्रालयकाले पुष्टि गरेको छ । टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा पठाइएको नमुनामा पोजेटिभ भेटिएको उनले जानकारी दिएको हो । तेस्रो संक्रमितलाई आइसोलेसनमा राखिएको बताइएको छ । यसअघि चीन र फ्रान्सबाट फर्किएका […]
खाद्यान्न, औषधि र स्वास्थ्य उपकरण तथा ग्यासका पसल नियमित सञ्चालन गर्न सरकारकाे निर्देशन
काठमाडौं, १२ चैत । सरकारले खाद्यान्न, औषधि र स्वास्थ्य उपकरण तथा खाना पकाउने ग्यास (एलपी ग्यास) का पसल नियमित सञ्चालन गर्न निर्देशन गरेको छ । मन्त्रालयले यसका लागि पसलमा भीड नगर्न र सुरक्षित रही कम्तीमा १ मिटरको दूरी राखी लाइनमा बस्न समेत आग्रह गरेको छ । मंगलवारदेखि सुरू भएको देशव्यापी लकडाउनका कारण खाद्यान्न, औषधि र […]
लकडाउन भरि कसरी समय बिताउने भनेर चिन्तामा हुनु हुन्छ ? ‘मुड फ्रेस’ गर्ने अप्नाउनुहाेस यी कार्य !
काठमान्डाैँ, १२ चैत । आजसम्म विश्वभरी ३९२,००० भन्दा बढी मानिसहरू कोरोना भाइरसबाट प्रभावित भइसकेका छन् । नेपालमा पनि कतारबाट आएकी एक महिलामा यसको संक्रमण भएको देखिएपछि नेपालमा पनि यसको लागि उच्च सुरक्षा सतर्कता अपनाइएको छ । यही घातक भाइरसको डरले स्कूल, कलेज र कार्यालयहरू सबै बन्द गरिएका छन्। सरकारले मानिसहरूलाई घरभित्र नै लकडाउन गर्ने बताउँदै आएको […]
नुवाकोट उद्योग वाणिज्य संघको सर्वत्र आलोचना
पोखरा १२ चैत । नोभल कोरोना (कोभिड १९) भाइरसबाट बच्न सरकारले देशभर लकडाउन गरेको अवस्थामा नुवाकोट उद्योग वाणिज्य संघले आज माक्स र फ्रुटी बाडे पछि सर्वत्र आलोचना भएको छ । सामाजिक संजाल प्रयोगकर्ताहरुले यो समय राहत बाडने नभएको भन्दै संघको आलोचना गरेका छन । सामाजिक संजाल प्रयोगकर्ताहरुले संघलाई प्रहरीले समेत सहयोग गरेको भन्दै प्रशासनलाई समेत […]
कोराना संक्रमित युवती सवार विमानमा आएका मध्ये १२५ जनासँग सम्पर्क
काठमाडौं, ११ चैत । कोराना भाइरस (कोभिड १९) बाट संक्रमित भएकी युवती सवार विमानमा १५८ जना रहेको खुलेको छ । उनीहरु मध्ये १२५ जनासँग सम्पर्क स्थापित भएको छ भने अरुसँग सम्पर्क स्थापित गर्ने प्रयास भइरहेको छ । चैत ४ गते फ्रान्सबाट कतारको दोहा हुँदै नेपाल आएकी युवतीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको थियो । उनको टेकु […]
लकडाउनलाई कार्यनयनमा ल्याउन नेपाली काँग्रेस वडा इकाईको माग
नुवाकोट ११ चैत । महामारीको रुप लिगेर विश्व भर फैलिएको नोभल कोरोना (कोभोडी-१९) विदेशबाट नेपाल आएकामा देखिएसँगै नेपालमा पनि यसको जोखिम बढेको भन्दै सरकारले लकडाउन गरेको छ । सरकारले गरेको लकडाउन प्रभावकारी कार्यनयन नभएको भन्दै नुवाकोट जिल्ला वेलकोटगढी नगरपालिका वडा नम्बर १२ नेपाली काँग्रेस वडा इकाईले साविक मदानपुर गाउँ इकाई समितिका सचिव रामहरि खनालको नाममा […]
सरकारले लगाएको लकडाउनमा बैंक खुल्ला गरिने
काठमाडौं, ११ चैत । सरकारले मंगलबारबाट एक हप्ताका लागि लगाएको लकडाउनमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सेवा भने दिने भएका छन् । बैंकहरुलाई निश्चित शाखा तोकेर सेवा नियमित गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिने तयारी गरेको छ । खाद्यान्न, औषधी लगायतका सामाग्री खुला रहेका र ती वस्तुहरु खरिद गर्न रकम चाहिने भएकाले बैंकहरुलाई सेवा दिइरहन […]